को जीनोटाइप के हो? वैज्ञानिक र शैक्षिक क्षेत्रहरू मा जीनोटाइप को मूल्य
जेनेटिक्स हामीलाई मानव जीनोम को अध्ययन मा आफ्नो उपलब्धिहरू र अन्य जीवित जीव संग बारम्बार हिट छ। सजिलो ह्यान्डलिङ र गणना साधारण अवधारणाहरु र वर्ण, deprived जो छैन र यो विज्ञान बिना छन्।
को जीनोटाइप के हो?
शब्द यसको कक्षहरू प्रत्येक को गुणसूत्रहरु भण्डारण गरिएको छ, जो एक जीव, को जीन को सेट बुझ्छु। जीनोटाइप को अवधारणा को जीनोम देखि प्रतिष्ठित हुनुपर्छ, टी। गर्न। दुवै शब्दहरू फरक lexical अर्थ बोक्न। तसर्थ, जीनोम बिल्कुल सबै यो प्रजाति को जीन (मानव जीनोम, को जीनोम बाँदर, खरायो जीन) छ।
एक व्यक्ति को जीनोटाइप कस्तो छ?
जीव मा जीनोटाइप के हो? सुरुमा जीन को सेट हरेक कक्ष अलग भनेर कल्पित। पुरुष र महिला: वैज्ञानिकहरूले दुई gametes को zygote को गठन को संयन्त्र खोल देखि यो विचार refuted थियो। धेरै प्रभाग द्वारा गठन भएको zygote कुनै पनि जीवित जीव, यो सबै पछि कक्षहरू जीन को ठीक नै सेट हुनेछ भनेर अनुमान गर्न सजिलो छ।
तर, यो बच्चा को आमाबाबुको जीनोटाइप को देखि विशिष्ट हुनुपर्छ। गर्भमा मा भ्रूण आफ्नो आमा देखि र पिता देखि जीन को आधा सेट छ, त्यसैले छोराछोरीलाई हुनत आमाबाबुको समान छन्, तर एकै समयमा तिनीहरूले 100% प्रतिहरू छैनन्।
को जीनोटाइप र phenotype के हो? तिनीहरूले कसरी फरक छ?
Phenotype - शरीर को सबै बाह्य र आन्तरिक सुविधाहरू एक संग्रह। उदाहरण को बाल रंग, freckles, उचाई, रगत, हेमोग्लोबिन को उपस्थिति, वा इन्जाइम संश्लेषण को अभाव हो।
तर, phenotype छैन निश्चित र स्थिर कुरा हो। तपाईं खरायो हेर्न भने, आफ्नो फर को रंग आधारमा भिन्न मौसम मा: को गर्मी मा उनि खैरो र जाडो सेतो छन्।
यो जीन को एक सेट सधैं स्थिर छ भनेर बुझ्न महत्त्वपूर्ण छ, र phenotype फरक हुन सक्छ। हामी खातामा शरीर मा हरेक एक सेल को livelihoods लिन भने, तिनीहरूलाई प्रत्येक ठ्याक्कै एउटै जीनोटाइप वहन। तथापि, इन्सुलिन नै, अन्य keratin मा, तेस्रो actin मा संश्लेषित छ। प्रत्येक आकार र आकार, कार्य मा प्रत्येक अन्य समान छैन। यो phenotypic प्रकटीकरण भनिन्छ। त्यो के जीनोटाइप र के phenotype फरक देखिन्छ हो।
यो घटना रोगाणु कक्षहरूको भिन्नता केही जीन गर्दा अरूलाई मा हो, काम समावेश भन्ने तथ्यलाई द्वारा बताए छ "सो मोड।" हाल वा जीवनकालमा निष्क्रिय रहने वा तनावपूर्ण अवस्थामा सेल द्वारा पुन: प्रयोग।
रेकर्ड जीनोटाइप उदाहरण
व्यवहार मा, आनुवंशिक जानकारी अध्ययन बाहिर छ जीन को ससर्त गुप्तिकरण प्रयोग गरेर। उदाहरणका लागि, खैरो आँखा जीन एक राजधानी "एक", र नीलो आँखा को अभिव्यक्ति संग लेखिएको छ - एउटा सानो पत्र "एक"। त्यसैले देखाउँछ कि एक मूख्य खैरो-आँखाहरू र नीलो को एक चिन्ह - एक मंदी।
त्यसैले, मा मान्छे को आधार हुन सक्छ:
मूख्य homozygotes (एए, ब्राउन-आँखाहरू);
heterozygotes (एए, खैरो-आँखाहरू);
recessive homozygotes (एए, नीलो आँखा)।
यो सिद्धान्त सामान्यतया जीन को धेरै जोडी प्रयोग जो, जीन आफूलाई बीच अध्ययन अन्तरक्रियामा अनुसार। यो प्रश्न उठ्छ: को जीनोटाइप3के हो (4/5/6, आदि ...)?
यो वाक्यांश तीन जीन जोडी एक पटक लिइएको छन् भन्ने हो। रेकर्ड निम्नानुसार, उदाहरणका लागि, हुनेछ: AaVVSs। त्यहाँ धेरै फरक विशेषताहरु (जस्तै, सीधा कपाल र घुम्रेको कपाल, तत्संबंधी प्रोटिन वा कमी उपस्थिति) को लागि जिम्मेवार छन् भन्ने नयाँ जीन छन्।
किन विशिष्ट प्रवेश ससर्त जीनोटाइप छ?
वैज्ञानिकहरू द्वारा पत्ता कुनै पनि जीन, विशिष्ट नाम हो। अक्सर यो लम्बाइमा धेरै आकार पुग्न सक्ने अंग्रेजी सर्तहरू वा वाक्यांश छ। त्यसैले वैज्ञानिकहरू जीन को एक सरल रेकर्डिङ भन्दा बढी प्रस्तुत छ विदेशी विज्ञान को प्रतिनिधिको लागि कठिन नाम को हिज्जे।
पनि एक उच्च विद्यालय विद्यार्थी कहिलेकाहीं के जीनोटाइप 3A थाहा गर्न सक्नुहुन्छ। यस्तो प्रविष्टि संकेत नै जीन को3alleles लागि जिम्मेवार जीन छ। यो नाम जीन प्रयोग गर्दा बंशाणु सिद्धान्तहरू समझ गाह्रो हुन सक्छ।
जब यो karyotype र डीएनए अध्ययन को गम्भीर अध्ययन, को जीन को आधिकारिक नाम त्यहाँ resorted जहाँ प्रयोगशालाहरुमा गर्न आउँछ। यो ती वैज्ञानिकहरूले जसले निष्कर्ष प्रकाशित लागि विशेष गरी साँचो हो।
जहाँ लागू जीनोटाइप
सरल प्रतीक प्रयोग अर्को सकारात्मक सुविधा - यो बहुमुखी। जीन हजारौं नौलो नाम छन्, तर ती प्रत्येक वर्णमाला मात्र एक पत्र द्वारा प्रतिनिधित्व गर्न सकिन्छ। प्रायजसो, अक्षरहरू बारम्बार गर्दै फेरि र फेरि विभिन्न सुविधाहरू मा आनुवंशिक समस्याहरू सुलझाने मा, प्रत्येक समय मूल्य decrypted। उदाहरणका लागि, जीन बी को समस्या मा - काले कपाल को रंग, र अन्य छ - Moles उपस्थिति छ।
प्रश्न मात्र होइन जीव लागि कक्षाकोठामा बढ्दो "को जीनोटाइप के हो"। वास्तवमा प्रतीक मा विज्ञान धमिलो शब्द र शब्दावली गराउँछ। लगभग बोल्ने, जीनोटाइप को प्रयोग - एक गणितीय मोडेल। वास्तविक, झन् गाह्रो जीवन सामान्य सिद्धान्त अझै पनि कागज स्थानान्तरण गर्न व्यवस्थित भन्ने तथ्यलाई बावजुद मा।
द्वारा र ठूलो छ, हामी तिनीहरूलाई थाहा जसमा फारम मा जीनोटाइप, स्कूल कार्यक्रम र समस्या को सुलझाने मा उच्च शिक्षा मा प्रयोग गरिन्छ। यो विषय "के जीनोटाइप" र विश्लेषण गर्न विद्यार्थीहरूले 'क्षमता विकास को समझ सरल। भविष्यमा यस्तो रेकर्ड प्रयोग को कौशल पनि उपयोगी छ, तर वास्तविक सर्तहरू र जीन को नाम वास्तविक अनुसन्धान लागि थप उपयुक्त हुन्छन्।
हाल, जीन विभिन्न जैविक प्रयोगशालाहरुमा अध्ययन गर्दै हुनुहुन्छ। इन्क्रिप्सन र जीनोटाइप को प्रयोग चिकित्सा consultations, एक वा बढी सुविधाहरू पुस्ताका एक नम्बर मा लगाया जान सक्छ जब लागि महत्त्वपूर्ण छ। विशेषज्ञहरु को उत्पादन केही सम्भावना बच्चाहरु मा phenotypic प्रकटीकरण भविष्यवाणी गर्न सक्नुहुन्छ मा (उदाहरणका लागि, गोरो को 25% वा polydactyly संग जन्म बच्चाहरु को 5% को उपस्थिति)।
जनसंख्या - ... आबादी छ। जनसंख्याको संरचना
प्रोटन शुल्क - आधार मूल्य प्राथमिक कण भौतिक
Cognition को विधिहरू
समुद्री शैवाल, प्रजातिहरू र आवेदन
को भूमध्यरेखा को लम्बाइ
होटल सेन्ट पीटर्सबर्ग को नेभिस्की प्रोस्पेक मा: ठेगाना, समीक्षा
अनुहार मिंक तेल
एक केटी र एक केटा को लागि छोराछोरीको कोठा - यो सिर्फ छ
प्रकार चाउ: शारीरिक वर्णन, वर्ण र कुकुर फोटो
अभिनेताहरु, प्लट र रोचक तथ्य: "300: एक साम्राज्य को उत्थान"
दुर्व्यवहार सिस्ट के हो?
दुर्लभ सिक्का "1 रुबल" 1997 र यसको मूल्य मा
"डिकलाक जेल" - एक विश्वव्यापी उपचारको लागि दुखाइको लागी मांसपेशिहरु र जोडीहरू
के मूत्र को रंग गर्छ? के रंग गर्नुपर्छ एक स्वस्थ व्यक्तिको मूत्र